मृगौलाको किनबेच १३ लाखमा, नक्कली भान्जाले पाए मात्र ८ लाख | Citizen Post News
मृगौलाको किनबेच १३ लाखमा, नक्कली भान्जाले पाए मात्र ८ लाख
२०७७ असार २९ गते ११:००
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले आइतबार नक्कली नाता र दाता देखाएर मृगौला प्रत्यारोपण गरेको आरोपमा पक्राउ परेका एक दर्जनलाई सार्वजनिक गर्‍यो ।
जसमा ललितपुर महानगरपालिकाका एक वडाध्यक्ष, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी, दुई प्रहरी र प्रत्यारोपणमा संलग्न चिकित्सकसमेत गरी १२ जना थिए । पक्राउ परेका एक दर्जन ब्यक्तिमाथि अदालतबाट म्याद लिएर थप अनुसन्धान थालेको ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द थपलियाले जानकारी गराए ।
उक्त प्रकरणमा नक्कली नाता प्रमाणित गरिदिने वडाध्यक्ष थिए-ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर-३ का वडाध्यक्ष गोपाल महर्जन । ब्यूरोको अनुसन्धानबाट उक्त मृगौला प्रत्यारोपण पुरै नाटकिय र अवैध भएको पुष्टि भएपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
प्रहरीले वडाध्यक्षसहिति जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा कार्यरत रामकुमार केसी र नवराज केसी, प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) भीमप्रसाद ढकाल र यसअघि पनि मिर्गौला तस्करीमा मुछिएका निलम्बित प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) योगेन्द्रराज थपलिया पनि पक्राउ गरेको छ ।
यसअघि २०७६ साउनमा काभ्रे बाङ्थलीका विष्णु खड्कालाई भारतमा लगेर मिर्गौला निकाल्न लागिएको घटनामा पनि उनको संलग्नता पुष्टि भएको छ ।
त्यसैगरी अन्य पक्राउ पर्नेमा चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकाल, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज टिचिङ अस्पताल चितवन भरतपुरका कानुनी सल्लाहकार मेश काफ्ले, अस्पतालका प्रमुख सञ्चालक अधिकृत डा. सुप्रभात श्रेष्ठ, अस्पतालमा कार्यरत डा. बालकृष्ण कालाखेती, नोबल अस्पतालका डा. राकेशकुमार वर्मा, भक्तपुरकी जमुना राजभण्डारी, भक्तपुर जगातीकी रेश्मा राई रहेका छन् ।
भारतीय लगानीमा सञ्चालिन चितवन भरतपुर मेडिकल कलेजबाट मानव अंगको प्रत्यारोपण तथा किनबेच हुने गरेको भन्दै विगतमा पनि खबर सार्वजनिक हुने गरेको थियो ।
प्रहरी सुत्रका अनुसार नक्कली भान्जाबाट १३ लाख रुपैयाँमा दाताले मृगौला किनेका थिए । तर नक्कली भान्जाले मात्र ८ लाख रुपैयाँ पाए । यो प्रकरणमा ३२ लाख रुपैयाँ बढी खर्च भएको थियो । सवै कुराको सेटिङ मिलेपछि नक्कली भान्जाबाट मृगौला किनेर प्रत्यारोपण गर्ने काममा डा. राकेश बर्माको टोलीले साथ दिएको थियो ।
यसअघि पनि प्रहरीको मानव बेचविखन तथा अनुसन्धान ब्यूरोले मृगौला किनबेचका आरोपमा निदान अस्पतालका सिइओसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो । पछिल्लो दुई महिनाको बिचमा सार्वजनिक भएका यी दुई वटा काण्डले नेपालमा प्रष्ट रुपमा मृगौलाको अवैध किनबेच र प्रत्यारोपण भइरहेको प्रमाणित हुन्छ ।